प्रसंग: अर्याल सम्मानित - नेपाल
प्रसंग: अर्याल सम्मानित
लीलाराम-कुन्तीदेवी न्यौपाने पत्रकारतिा सम्मान-२०७० बाट नेपाल साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक प्रशान्त अर्याल सम्मानित भएका छन्। गुल्मीमा विसं १९८५ मा जन्मिएका लीलाराम न्यौपानेको ८५औँ जन्मजयन्तीको अवसर पारेर अर्याललगायत सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने ६ जनालाई २९ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले सम्मान गरेका थिए। सम्मानका साथ ताम्रपत्र र जनही ५१ हजार रुपियाँ प्रदान गरएिको थियो। अर्यालसँगै पत्रकारतिा सम्मान इमेज टेलिभिजनका समाचार प्रमुख महेन्द्र विष्टले समेत पाएका थिए। प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरएिको स्वास्थ्य सम्मान प्रा डा भगवान् कोइराला, समाजसेवा सम्मान इन्दिरा रानामगर, खेलकुद सम्मान क्रिकेटर शक्ति गौचन र शिक्षा सेवा सम्मान सिद्धबाबा उच्च मावि तम्घासका प्राचार्य डोरविक्रम श्रीष र बाजुराको स्वामी कार्तिक उच्च माविलाई प्रदान गरएिको थियो। उक्त अवसरमा विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कार्यरत संस्थालाई अक्षय कोषका निमित्त पनि रकम प्रदान गरएिको थियो। प्रतिष्ठानले सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा वाषिर्क ५० लाख रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ।
कला: सिनेमाघरमा रेड मनसुन
काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिवल -किम्फ)मा धेरैको वाहीवाही बटुलेको थियो, रेड मनसुनले। इलम दीक्षितको डेब्यु निर्देशन रहेको सोही फिल्म २६ वैशाखबाट सिनेमाघरमा रििलज हुँदै छ। मच्छिन्द्रनाथ जात्राको कोलाहल र चर्को ध्वनिको पृष्ठभूमिमा पाटन सहरको एउटा कथामा एक्लोपन, सामाजिक गतिरोध र नारी स्वाभिमान प्रकट गरएिको छ।
अमेरकिाको सारा लरेन्स कलेजबाट ग्रयाजुयट दीक्षितको फिल्ममा सोही कलेज पढेका रुथ मो -निर्माता), डग्लस म्याकह्युज -क्रियटिभ प्रोड्युसर) र सारा लेन्सका मिडिया आर्ट कार्यक्रमका टेक्निकल डाइरेक्टर ब्रायन एमेरी -डिरेक्टर अफ फोटोग्राफी) छन्। आफ्नो फिल्म फरक भाषा र पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको सहकार्यको नमुना भएको निर्देशक दीक्षितको दाबी छ।
फिल्म: मात्र मनोरञ्जन
उसो त डेभिड धवनसँग खुराकयुक्त फिल्मको अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हो। पार्टनर, रास्कल, मैने प्यार क्यों किया, डु नट् डिस्टर्बलगायतका दर्जनौँ फिल्मबाट उनी कुन खेमाका निर्देशक हुन भन्ने प्रस्ट हुन्छ। रोमान्स, कमेडी, एक्सन र बजारु संगीत उनका फिल्मका विशेषता हुन्। एउटै कथामा यिनै तत्त्वहरू घोलेर दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाउन माहिर छन् उनी। नयाँ फिल्म में तेरा हिरो पनि उनका पुराना फिल्मभन्दा रत्तिभर भिन्न छैन। फरक त छ केवल हिरो। गोविन्दा र सलमान खानलाई छाडेर यसपटक उनले आफ्नै छोरा वरुण धवनलाई हिरो बनाएका छन्। तर, वरुणलाई वरुण होइन, गोविन्दा र सलमालको मिश्रणजसरी प्रस्तुत गरेका छन्।
चुलबुले केटो सिनु उर्फ श्रीनाथ प्रसाद -वरुण) आफ्नो पढाइ पूरा गर्न बैंगलोर जान्छन्। तर, उनको ध्यान पढाइमा भन्दा कलेजकी सबैभन्दा सुन्दरी सेनेना
-इलियाना डिक्रुज)तिर जान्छ। सुनेनालाई 'पट्याउन' अनेक जुक्ति निकाल्छन्। सहरको नामूद पुलिस इन्स्पेक्टर अंगद -अरुणोदय सिंह), जो पुलिस कम गुन्डा ज्यादा लाग्छन्, उनी पनि सुनेनासँग फिदा हुन्छन्। रसिाहा अंगदलाई छक्याउँदै सुनेनालाई आफ्नो बनाउन सिनु सफल हुन्छ। तर, त्यही बेला अन्डरवल्र्ड डन विक्रान्त -अनुपम खेर)ले अंगदको सहयोगमा सुनेनाको अपहरण गर्छन्। उनी आफ्नी प्यारी छोरी आयशा -नरगिस फाखरी)को विवाह सिनुसँग गराउन चाहन्छन्। एउटा अन्डरवल्र्ड डनको फन्दामा परेकी आफ्नी गर्लप|mेन्डलाई फुत्काउन सिनुले गरेको रमाइलो संघर्षमै फिल्म सकिएको छ।
फिल्ममा सबैभन्दा खड्किएको पक्ष भनेको नयाँपन हो। कथानक, संवाद, संगीत, कलाकारको अभिनय र लोकेसन कुनै पनि ताजा लाग्दैन। सुनेना अपहरणमा परेको बाहेक फिल्ममा कुनै नयाँ मोड छैन तर पनि हाँस्दाहाँस्दै फिल्म सकिन्छ। पहिले देखाइसकिएको कथालाई ओल्टाइपल्टाई गर्दा पनि स्वादिलो हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो फिल्म। तर, यस्ता फिल्मको आयु लामो हुँदैन। हेर्‍यो, हाँस्यो, सकियो। मनोरञ्जनको मात्र अपेक्षा गर्नेले में तेरा हिरो हेर्दा हुन्छ तर सार्थक फिल्ममा रुचि भएकाले यतातिर नलाग्दै ठीक होला।
अचानक: 'नियम-मापदण्ड व्यवसायीले मान्नैपर्छ’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेसँग चुनाव र त्यसपछि महासंघका योजनाबारे गरिएको कुराकानी:
केन्द्रीय सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्मका पदमा रहेर करिब १८ वर्ष महासंघका विभिन्न क्रियाकलाप र नीतिनियमको कार्यान्वयनमा खेलेको सकारात्मक भूमिकाकै परिणाम ठानेको छु ।
नेतृत्वमा आएपछि तपाईंका प्राथमिकता ?
औद्योगिक नीति बनेको थुप्रै भयो, अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र -सेज)को पनि त्यस्तै अवस्था छ । उद्योगी-व्यवसायीका लागि अति आवश्यक ऐनहरू बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । त्यसबाहेक जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका अवरोध हटाउँदै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नु प्राथमिकता हुनेछ ।
यसपटकको चुनावमा त चरम गुटबन्दी देखियो नि ?
गुटबन्दी भनेको चुनावअघि मात्र हो । चुनावपछि कुनै गुट छैन ।
महासंघमा चुनाव हारेकाले संस्थापनलाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति छ नि ?
यसपटक त्यो हुनेवाला छैन । सबैलाई तीतो र नमीठो कुरालाई बिर्सन आग्रह गर्छु ।
निजी क्षेत्रले भोगिरहेका प्रमुख समस्या के के हुन् ?
निकै चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । बजेट छ, कार्यान्वयन छैन । नीति छ, लागू हुँदैन । बन्द-हडतालको संस्कृति तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । पुँजीको अभावभन्दा व्यवस्थापनको समस्या बढी छ ।
समाधान नि ?
बैंकमा अर्बाैंको रकम थन्किएको छ । सरकारी ढुकुटीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । लगानी किन विस्तार हुन सकेको छैन त ? यसमा गम्भीर हुन आवश्यक छ । बन्द-हडतालको संस्कृति अन्त्य हुनासाथ धेरै कुरा सुधार हुन थाल्छ । बाहिरको भन्दा पनि हामीभित्रको सोच नै प्रमुख अवरोधका रूपमा देखा परेको छ । त्यो सोच बदलिनासाथ लगानीको वातावरण बन्छ ।
उद्योगी-व्यवसायीप्रति आमजनताको विश्वास निकै कमजोर छ नि ?
गुणस्तर र मिसावटका कुरामा अविश्वास बढेकै हो । त्यसको समाधान भनेको सरकारी संयन्त्रको अनुगमन बलियो र पारदर्शी हुनुपर्‍यो । नियम-मापदण्ड व्यवसायीले मान्नैपर्छ ।
सन्दर्भ: छायाँमा पेन्टिङ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की कुची र रंग लिएर क्यानभासमा पुगे र नेपालको राष्ट्रिय झन्डा कोरे। त्यसलाई वरष्िठ चित्रकार किरण मानन्धरले पूर्णता दिए। लोकबन्धु कार्कीको क्यानभासमा जीवन नामक एकल चित्रकला प्रदर्शनीको उद्घाटन
पाटन संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएका लोकबन्धुका चित्र अमेरकिी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज बुसले कोरेका चित्रभन्दा पनि अब्बल भएको आयुक्त कार्कीले दाबी गरे। उनको भनाइ थियो, "जर्ज बुस पनि चित्र कोर्दा रहेछन्, एउटा कलाप्रेमीका रूपमा म दाबीका साथ भन्न सक्छु, तुलनात्मक रूपमा लोकबन्धुका यी चित्र उत्कृष्ट छन्।"
तैलीय माध्यमबाट कोरएिका लोकबन्धुका चित्र मूर्त शैलीका छन्। प्रदर्शनी उद्घाटनको रमाइलो पक्ष के थियो भने लोकबन्धुका पेन्टिङ लोकमानसिंह कार्कीको छायाँमा परेको अनुभूति हुन्थ्यो। लोकमानका अघिपछि चाकडी शैलीमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीदेखि ठूला उद्योगीसम्म प्रस्तुत हुँदा लोकबन्धुका चित्रकला भने ओझेलमा परेझैँ लाग्थे।
प्रकाशित: वैशाख ७, २०७१